Wararka Suuqa Kala Iisbiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Caawa: Frank Oo Ka Hadlay Bixitaanka Billy Gilmour Iyo Qodobo Kale
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Caawa: Frank oo ka hadlay Bixitaanka Billy Gilmour iyo Qodobo kale
Tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa sheegay inaysan macquul aheyn in amaah lagu fasaxo Billy Gilmour ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga. (SkySports)
Mesut Ozil ayaa saxiixay heshiis seddex sano iyo bar ah, wuxuuna mushaar ahaan uga qaadan doonaa Fenerbahce Qayaasta 60,000 isbuucii. (Goal)
Crystal Palace ayaa xiiseyneysa saxiixa garabka kooxda Leicester Demarai Gray bishaan. (SkySports)
Liverpool iyo Manchester United ayaa la kulmay dharbaaxo suuqa kala iibsiga ah ka dib markii Bayern Munich ay horumar ka sameysay heshiiskii ay kula saxiixan lahayd Jamal Musiala qandaraas cusub, sida ay qortay jariirada Mail. (Dailymail)
Barcelona ayaa qorsheyneysa inay la soo wareegto xidiga Manchester City weeraryahankeeda Sergio Aguero iyo Daafaca Bayern Munich David Alaba dhamaadka xilli ciyaareedkan marka heshiisyada dhamaadaan sida ay qortay (Dailymail)
Roma ayaa diyaar u ah inay ka fiirsato dalabyada u imaanaya weeraryahan Edin Dzeko bishaan, sida laga soo xigtay (Corriere Dello Sport).
Man United, Chelsea iyo Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay yihiin kooxaha xiiseynaya heshiiska iibsiga daafaca dhexe ee RB Leipzig Dayot Upamecano. Dayot wuxuu noqon karaa mid wax ku ool u ah seddexda koox ee la soo sheegay, iyadoo dhammaantood ay leeyihiin dhibaato difaac muddooyinkii u dambeeyay. (Ligafinancial)
Julian Draxler ayaan ku biiri doonin kooxda reer London ee Chelsea suuqa janaayo. Taasi waa sida laga soo xigtay wargeys ka soo baxa Jarmalka, kaasoo shaaca ka qaaday in 27 jirkaan weerarka ka ciyaara uu go’aansaday inuu dhameystiro heshiiskiisa PSG isla markaana uu ka tago dhamaadka xilli ciyaareedka. (Football)
Kooxda Liverpool ayaa diirada saareysa qadka dhexe ee Udinese, Rodrigo De Paul, si ay bedel ugu noqoto Georginio Wijnaldum, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya talyaaniga. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Netherlands ayaan weli heshiis cusub u saxiixin kooxda heysata horyaalka PL, waxaana laga yaabaa inuu ka tago Liverpool dhamaadka ololahan haddii uu ku guuldareysto inuu heshiis cusub la gaaro. (Metro)